TWILIGHT EZINZULWINI ZOBUSUKU ELANGENI UMDLALO WOKUKHUTSHWA, UKUKHANYA, UKUBAKHO? - IIMUVI
Twilight ezinzulwini zobusuku elangeni Umdlalo wokukhutshwa, ukuKhanya, ukubakho?
Inoveli yeTwilight Saga kunye nomdlalo bhanyabhanya waba luphawu oluphambili kuhlobo lwefantasy kunye nothando. Ifilimu
Inoveli yeTwilight Saga kunye nomdlalo bhanyabhanya waba luphawu oluphambili kuhlobo lwefantasy kunye nothando. Uthotho lwefilimu, olwaludlala uKristen Stewart noRobert Pattinson, bafumana i-3.3 yezigidigidi zeedola. Umbhali wolu ngcelele, uStephanie Meyer, nangona kunjalo, akenzanga ngeTwilight okwangoku. Ngo-2020, uMeyer wakhupha i-Midnight Sun, ebalisa ibali lencwadi yokuqala yeTwilight kunye nembono kaEdward Cullen.
Uluhlu lweemovie zentsomi zamaGrike
UMeyer waqala ukubhala inoveli ngexesha lokuqala lomdlalo bhanyabhanya iTwilight waze wabonisa uPattinson ezinye izahluko zokuziva ngcono isimilo sikaEdward. Ezinzulwini zobusuku ezinjengezifakelo zangaphambili zeLanga zaba yimpumelelo enkulu, kuthengiswa iikopi ezizigidi kwiveki yokuqala yokukhululwa.
Ngaba le ncwadi iyalungiswa?
Ngenxa yokuphumelela kunye nokuthandwa kothotho lweTwilight, uninzi lweengcali zefilimu zazikholelwa ukuba incwadi inokulungiswa. Umlingiswa kaEdward Cullen akanalo imvelaphi eninzi, kwaye akukho nto eyaziwayo malunga nexesha lakhe elidlulileyo, elinokuba yinto enomdla kubantu abaninzi. Ngelishwa kubalandeli beTwilight, okwangoku akukho zicwangciso zokuhlengahlengisa inoveli. URobert Pattinson wayekhe watyhila ukuba wenziwe wabonisa uEdward Cullen njengoko wayefuna ukuzama ezinye iindima zefilimu zohlobo oluthile.
Namhlanje, uPattinson uphumelele kakhulu, ebonisa uluhlu lwakhe kwiifilimu ezininzi ezinjengexesha elihle, uMtyholi lonke ixesha, uKumkani kunye neTenet. Ngoku uxakekile ngokudubula iBatman kunye nomphathi uMat Reeves. Kwakhona, bobabini uRobert Pattinson noKristen Stewart badala kakhulu ngoku ukuba bangadlala ii-vampires zolutsha kwakhona. Kukho amathuba okuba istudiyo siqwalasele ukuqala kwakhona kolu ngcelele.
Ngaphandle kwelanga ezinzulwini zobusuku, uMeyer wabhala ngokucinga kwakhona ngeTwilight enesihloko esithi Ubomi nokufa, apho uEdward noBella batshintshiselana ngesini kwaye bathiywa igama lokuba nguEdythe noBeau. Le noveli inokusebenza njengokuqala kwe kuthotho lwefilimu eyahlukileyo yeTwilight kwaye uhambe ngendlela entsha eyahlukileyo. Maninzi amathuba okuba ifilimu entsha yeTwilight yenziwe njengoko kukho umdla omkhulu kwi-franchise. Kwaye kwakhona, ukuqala ngokutsha kunye nokulandelelana kuye kwaba yimpumelelo kwifom yaseHollywood kule minyaka idlulileyo.
inkosi yamakhonkco chwetheza iimuvi
Ngubani kwi-Cast? Ngowuphi uMhla wokuKhutshwa kweTwilight Midnight Sun Movie?
Kuba ifilimu ayikabikho kwimveliso okwangoku, akukho kuphoswa kwenzekayo okwangoku. Ifilimu nayo ayinayo umhla wokukhululwa okwangoku. Akukho hlaziyo kumhla wokukhutshwa kwefilimu yeTwilight Midnight Sun.
indawo ethuleyo 2 umhla wokukhutshwa kwi-hbo max
I-Twilight Saga ukuza kuthi ga ngoku -
Olu luhlu lwaqala ngo-2008 ngokukhutshwa kweTwilight, elandela uBella ethandana nevampire, uEdward. Kwinxalenye yesibini, iNyanga eNtsha, uEdward uthathe isigqibo sokuhlala noBella kwaye uyahamba nosapho, emshiya edandathekile. Emva kwexesha udibana noJacob Black, ingcuka. Kwifilimu yesithathu, i-Eclipse, uBella uyasamkela isicelo sika-Edward sokutshata naye kwaye ujongane nengozi evela kwindlu ye-vampires ezimbi. Kwiifilimu ezimbini zokugqibela, iBreaking Dawn Part 1 kunye neCandelo 2, uBella utshata no-Edward, kwaye banentombi, uRenesmee, ongumntu onesiqingatha-vampire.
Bajoyina imikhosi kunye ne-werewolves kunye nezinye iintsapho ze-vampire ukukhusela iRenesmee kwiVolturi.
Kuya kuba ngumzuzwana ngaphambi kokuba kukhutshwe enye ifilimu yeTwilight. Kuninzi okunokuphononongwa kwiTwilight Saga, kwaye akukho mathuba anokukhutshwa. Bonke abalandeli beTwilight kuya kufuneka babe nomonde kwaye balinde ngaphambi kokuba ifilimu entsha iphinde ibonise izikrini kwakhona.
igcinwa yintsimbi kwi-netflix
iphuma nini isason 3?
I-oda yokugqibela ye-anime netflix
Ixesha lesine lehaikyuu
bethuna raider 2 imovie